သက်တန့်ချို: ယခု ဖြစ်ပွားနေသော ဘင်္ဂါလီများ၏ အကြမ်းဖက် ဆူပူယုတ်မာမှုများအပေါ် လတ်တလောသုံးသပ်ခြင်း
ယခု ဖြစ်ပွားနေသော ဘင်္ဂါလီများ၏ အကြမ်းဖက် ဆူပူယုတ်မာမှုများအပေါ် လတ်တလောသုံးသပ်ခြင်း
အောက်ပါအမြင်တွေဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့တစ်ဖတ်သတ်အမြင်များ ( Personal View ) များဖြစ်တဲ့အတွက် မှားတာတွေ လည်းရှိသလို မှန်တာတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ် ။ တစ်ခုဝန်ခံချင်တာကတော့ “ ကျွန်တော် တိုင်း ရင်းသားတွေ အားလုံးကို ချစ်တယ် မြန်မာပြည်ကြီးကိုချစ်တယ် ” ဆိုတာပါပဲ ။
၁ ။ သွေးခွဲမှုတွေ လှုံဆော်မှုတွေကိုလည်း နေရာအနှံ့မှာ တွေ့နေရတယ် ။ ဆူပူအုံကြွမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ အရေး အသား မျိုးတွေကို ရှဲမလုပ်မိဖို့နဲ့မရေးသားကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ် ။ အစိုးရက အကောင်း ဆုံးကိုင် တွယ်နိုင်ဖို့ယုံကြည်ချက်လည်းထားခဲ့ပါတယ် ။ အခုဆို ၄ ရက်ကျော်သွားခဲ့ရပြီ ဒီနေ့လည်း ဘာသတင်းတွေ ထပ်ကြားရမလဲ မသိဘူး ။
၂ ။ သတင်းတစ်ခုကြားတိုင်း ချင့်ချိန်ပြီးယုံစေချင်ပါတယ် ။ အင်တာနက်စာ မျက်နှာတွေမှာ လည်း မြန်မာ လိုရေး တာပဲ ကွာဆိုပြီး ရေးချင်တိုင်းရေးလို့မဖြစ်သေးဘူး ။. နိုင်ငံခြားက အင်တာနက်စာမျက်နှာတိုင်းမှာ စစ်တပ် က မြန်မာတွေက ဘင်္ဂါလီတွေကို ပစ်သတ်နေဆိုပြီး သတင်းမှားတွေလျှောက်ရေးနေကြတယ် ။ မသိရင်တစ် ကမ္ဘာလုံးက မြန်မာနိုင်ငံကို လက်ညှိုးဝိုင်းထိုးကြမယ့်အဖြစ် ။
၃ ။ ဘာသာရေးခေါင်းစဉ်တွေ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုခေါင်းစဉ်တွေ မတပ်စေချင်ဘူး ။ အခုဖြစ်နေတာ ဘင်္ဂါလီ သောင်းကြမ်း သူ တွေနဲ့ တိုင်းရင်းသား ရခိုင် မြန်မာလူမျိုး တွေဖြစ်တယ် ။ အကြမ်းဖက်ဘင်္ဂါလီတွေကို ထိရောက် စွာ နှိမ်နှင်းရမှာက တပ်မတော်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ် ။ ဒါကို အစ္စလာမ် တွေ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ခရစ်ယာန်တွေ ဘယ်လို ဘာသာရေးခေါင်းစဉ်မှ မတပ်စေချင်ဘူး ။ စေတနာ နဲ့ နေခွင့်ပေး ထားတဲ့အိမ် ရှင်ကို ကျေးဇူးကန်းပြီး အိမ်ရှင်ကို ပြန်ကိုက်တဲ့အဖြစ်လို့ပဲ နားလည်ထားစေချင်တယ် ။ ဘယ်လို လူမျိုးရေး ဘာသာရေးခေါင်းစဉ်မှ မတပ်ကြပါနဲ့ ။ အခြေအနေကပိုဆိုးသွားနိုင်တယ် ။ ဘာသာရေးအား လုံးဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး ကို ဦးတည်သွားနေတာချည်းပါပဲ ။
၄ ။ စေလွှတ်တဲ့ စစ်သားဦးရေနဲ့လုံထိမ်းဦးရေ နည်းနေတယ်လို့ ၀ိုင်းထောက်ပြကြပေမယ့် နည်းနေတုန်းပဲ ။ ထပ်မံပြီး တပ်မတော် သားတွေ စေလွှတ်ဖို့ အများကြီးလိုပါသေးတယ် ။ သွားလာဖို့အခက်အခဲရှိလို့ပဲလား ဆူပူမှုကြီး ကို ထိမ်းထားနိုင်လောက်တဲ့ လုံထိမ်း ရဲ စစ်သား ဦးရေမတွေ့ရသေးဘူး ။
၅ ။ နှလုံးသားမရှိတဲ့လူတွေကတော့ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို နေနေကြပေမယ့် နှလုံးသားရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံး ခံစားချက်တွေနဲ့ နာကြည်းနေကြတယ် ။ အစိုးရရဲ့ အရေးယူနေမှုအပေါ်မှာလည်း အားမလိုအားမရဖြစ်နေကြတယ် ။ ဒါကြောင့် အစိုးရအနေနဲ့လည်း တစ်ခုခုကိုတော့ပြတ်သားစွာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ လိုနေခဲ့ပြီး ။
၆ ။ ဟိုဖက်ကမီးရှို့လိုက် ဒီဖက်က ပြန်ရှို့လိုက်နဲ့ကြာရင် ရခိုင်ကရွာတွေအကုန်လုံးပြာတွေဖြစ်ကုန်တော့မယ် ။ အစိုးရအနေနဲ့ ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ အမြန်ဆုံးထပ်မံတိုက်တွန်းပါတယ် ။ အခုဆို ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းတွေမှာ ဒုက္ခသည်တွေပိုပိုများပြားလာတယ် ။ တပ်မတော်အနေနဲ့ တစ်ခုခုကို ပြောင်း လဲသင့်ပြီလို့လည်းမြင်မိတယ် ။ ဘဂါင်္လီတွေကို ရိုဟင်ဂျာအဖြစ် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ် စုထဲသွတ်သွင်း ဖို့လက် မခံနိုင်ကြောင်းလည်း ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲပြုလုပ်ပေးဖို့သင့်တယ်လို့မြင်မိတယ် ။ Result ထွက်လာတာနဲ့ ဘဂါင်္လီတွေကို တစ်ယောက်မကျန်မောင်းထုတ်ပစ်နိုင်မှာပါ ။
၇ ။ တချို့ကပြောကြတယ် လူလူချင်းစာနာ ညှာတာစိတ်ထားပါ ဘင်္ဂါလီတွေလည်းလူတွေပါပဲတဲ့ ။ မှန်ပါတယ် လူလူချင်းညှာတာစိတ်ထားတာ မြန်မာတွေရဲ့ ချစ်စဖွယ်စိတ်ထားလေးပါ ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီစကားကိုပြန်ကောက် ရရင်တော့ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ လူတွေတော့ဟုတ်ပါရဲ့ ဒါပေမယ့်လူလိုကျင့် လူလိုမကြံကြလို့သာ အခုလို အခြေအနေ ဆိုးကြီးကို ကြုံတွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ် ။ ဘာသာရေးနာမည်ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ရန်တိုက်ပေးလို့ သူတို့ ဟာ ခြေကုပ်တစ်ခုရအောင် ကြိုးစားပြီး မရနိုင်မှန်းသိတော့မှ မစားရတဲ့အမဲ သဲနဲ့ပက်ဆိုသလို ရခိုင်တစ်ပြည် လုံးပြာကျသွားအောင် ကြံစည်နေကြခြင်းများလားတွေးမိတယ် ။
၈ ။ အစိုးရခေါင်းဆောင်လူကြီးပိုင်းတွေလည်း ဒီကိစ္စအတွက်အတော်ကြီးခေါင်းခဲနေကြပြီဆိုတာ သိသာပါတယ် ။ အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ အတွက်အရေးအကြီးဆုံးက ယုံကြည်ချက်ပါပဲ ။ ဘာတွေကိုယုံရမလဲ ဆိုတဲ့ခေါင်း စဉ်ပေါ့ ။ လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့နေနေတာ ကျွန်တော်တို့ ကို သိသာထင်သာမြင် သာတဲ့ပြောင်း လဲမှုတွေလုပ်ဆောင်ပေးနေတာ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ပါ ။ ဒီတော့ သမ္မတကြီးကို ကျွန်တော်တို့ယုံရ ပါလိမ့်မယ် ။ နောက်တစ်ခုကတော့ CNN အထိ သတင်းတွေ လွှင့်ထုတ်ပြီး မြန်မာ့ အခြေအနေမှန်ကို ကမ္ဘာကအ ထင်မလွဲအောင် တချိန်လုံး (မြစ်ဆုံကိစ္စ အပါအ၀င် ) ပြည်သူတွေနဲ့ လက်တွဲလို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နံပတ် ၁ သတင်းမီဒီယာအဖြစ်ရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့ EMG ကို ယုံရပါလိမ့်မယ် ။ ( EMG က လူလား လို့ ကျွန်တော့်ကို မမေးပါနဲ့ EMG က လူတစ်ယောက်နှင့်မှ ကျွန်တော်အပြင်တွင်မသိပါ ကျွန်တော် သည် သာမန်ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်သာဖြစ်သည် )
၉ ။ နယ်စပ်ဒေသ လ၀က နဲ့တကွ ပြည်တွင်းဝင်ခွင့်တွေကို ဒီထက်ပိုပြီး စနစ်တကျလုပ်ဆောင် ရမယ်ဆိုတာ လည်း ပေါ်လွင်လာပါတယ် ။ ဒါတွေထားလိုက်ပါဦး လတ်လော ရခိုင်ပြည်နယ်က မီး တခြားပြည်နယ်တွေမ ကူးစက်အောင် စနစ်တကျ ထိမ်းသိမ်းဖို့လိုသလို သောင်းကြမ်းသူ အကြမ်းဖက်သူတွေကိုလည်း ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်ဖို့လည်း တိုက်တွန်းပါတယ် ။ နိုင်ငံတကာက ကြည့်နေတာကို သိပ်ပြီးခေါင်းထဲမ ထည့်ပဲ ပြည်သူ အတွက် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာဆိုရင် သမ္မတကြီးအနေနဲ့ သိပ်စဉ်းစားမနေပဲ တင်းကြပ်ပြတ်သား စွာ လုပ်ဆောင်စေချင် တယ် ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့အခုလို ထပ်သွားနေရင် ပိုပြီးအထိနာပြီး ဘာ မှအကျိုးရှိ လာနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ် ။
၁၀ ။ သတင်းမီဒီယာတွေလည်း ခေါ်ယူသတိပေးမှုကြောင့်နည်းနည်းတော့ တွန့်သွားကြမယ်လုိ့ယူဆတယ် ။ ဒါပေမယ့် လည်း စဉ်းစားချင့်ချိန်လို့ တင်သင့်တာကိုတင်ပေးကြပါ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက INGO တွေလည်း ဘယ်လို လှုပ်ရှား မှုမှ သတင်းမကြားရသေးတာ ရှက်စရာလို့မြင်မိတယ် ။ ပရဟိတအဖွဲ့တွေလည်း အစွမ်း ကုန်ကြိုး စား လို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကယ်ဆယ်ရေးမှာ တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်ကြဖို့ ဆန္ဒပြုပါတယ် ။ ကျွန်တော် လည်း တတ်နိုင် သလောက် သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ ကြိုးစားနေမှာပါ ။
9:31 AM 12/6/2012
Photo : Hmuu Zaw
Posted by သက်တန့်ချို at 10:17 AM
We support your view. The president has to decide clearly. The army sent in are not enought to protect the Rakhine people who are citizen of Myanmar. It is not fair if the information on Burmese army collecting the knife, the bamboo stick only from Rakhine is correct. Why not from Rohinga? Where do the Rohinga got the guns? The govt has to think seriously to protect its own citizen. Now in the international news about the peace group. The govt should be aware of the bait. If the donor and other support group suggest to accept the Rohinga as ethinic, the govt should not accept it. Please ask the buremse citizen first. My personal view is none of the burmese citizen will accept. If the govt ever decide to accept them as citizen, it makes matter worse and sufferer will be the Burmese. Though it was now in the history, since U Nu's time, the govt should not accept them. Becasue of the Burmese govt's silliness cause the life of the Rakhine people. Therefore, be careful! The Bangaladish Govt who does has the same language the Rohinga spoken, their muslim brotherhood does not want to accept them, please give meareason why Burmese who does not have same language, same religion and same culture with them have to accept?
All the Buremse unitedly defend your own country.
Maribel Artaste June 14, 2012 at 11:02 AM
by Mg Han on Thursday, June 14, 2012 at 11:00pm ·
ရခိုင်အရေးသည် ဘုမသိ ဘမသိနှင့် မွတ်နှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်ကြရပြီ။ မဟုတ်ပါ မဖြစ်သင့်ပါ။ မသုံးနုန်းသင့်ပါ။ အဲသလို ခွဲခြား မမုန်းသင့်ပါဟု အတန်တန်တားပါလျက် ကိုယ့်လူတို့ ကိုယ်မပိုင်၊ နိုင်လဲမနိုင်သဖြင့် ငုတ်တုပ်ထိုင်လျက် ကန်ရာရှိခဲ့ပြီ။ သို့သော် အဆိုးမဆိုသာ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရတောင် လေလားဝမ်းလား မကွဲသည်မှာ တို့လိုလူတွေ အများကြီးဟု ပျော်စရာပင်ကောင်းသေး၏။ ကိုယ်တိုင်က ဘေးထိုး အရင်းကြီးထားတော့။ လေထိုးလေလျော်ပေမယ့် မျှော်မိသေးသား။ အားလုံးလက်ရှောင် ကုန်ပြီ။ ပေါက်ကောင် ခုထိမဖွင့်သေး။ နောက်ဖေးကမီးခိုးတလူလူ။ လူ လူဆိုတာနဲ့ ပြေးမလား၊ ချမလားပြင်ထားရ။ ငါတို့ညံ့လှတယ်။ ချာတူးလန်အောင် ငါတို့နှင့် ငါ့တို့အမျိုးတွေ ညံ့ဖျင်းလှသည်။ မခံနိုင်လဲ မတတ်နိုင်ကြကုန်။ ငစွေဆရာလုပ်သလို သိသမျှ သဘောတရာများအား ရှင်းပါမည်။ ဒေတာ အတိအကျဖြင့်သိနိုင်ရန် တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်မဟုတ်။ ၄င်းအရေး ဇောင်းပေးသူလည်းမဟုတ်သဖြင့် သီးခံကြပါကုန်။
သိသမျှပြောပါမယ်။ ထိုင်းမှာ ဗမာတွေရှိသလိုမျိုး။ ရခိုင်မှာ ဘင်္ဂလီတွေရှိခဲ့တယ်။ သူတို့အတူတူနေတယ်။ ဒေသကအလုပ်သမားလိုလို့၊ ဝန်ထမ်းက လဘ်လိုလို့၊ အချို့ကမဲလိုလို့၊ သူတို့ နိုင်ငံသားဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ မဆန်းဘူး၊ မဆန်းပေမယ့် မရိုးဘူး။ မှတ်ပုံတင်တစ်ခု လူ ၂၅-၃၀။ မှတ်ပုံတင်ပျောက်လို့ ရဲစခန်းထောက်ခံချက်နဲ့။ မှတ်ပုံတင်ပျောက်လို့၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံချက်နဲ့။ မှတ်ပုံတင်ပျောက်လို့၊ နောက်တစ်ခုနဲ့၊ သူတို့ ဖါးခုန်စနစ်နဲ့ ဝင်လာတယ်၊ ဖြတ်ကျော်သွားတယ်။ တစ်ထောက်နားသွားတယ်။ တစ်ဆင့်ခံသွားတယ်။ မစစ်ဘူးလား၊ မဆေးဘူးလား၊ ငွေရလို့လားမေးရင်၊ ခင်ဗျားကို
လှိုင်သာယာဘက် ခေါ်သွား လူတစ်ယောက်ကို ပြပြီး အိမ်ထဲထည့် အဲဒီလူပြန်ရှာခိုင်းလိုက်ချင်တယ်။ လူလုံးကွဲ၏ မကွဲ၏။ လောင်းကြည့်ချင်တယ်။ (လဝကထဲ အမျိုးမရှိပါ)မှတ်ပုံတင် အထောက်အထားအရ။ ထင်ရှားသော အမှတ်အသားဆိုတာ။ အမာရွတ်ပဲရှိရှိ၊ မှဲ့ပဲပါပါ ဖြတ်ကနဲကြည့်တာနဲ့ သိနေဖို့ဆိုတာ ရပ်ဆွေရပ်မျိုးဖြစ်နေဖို့ထိလိုတယ်။
စစ်ဆင်ရေးဆိုသည်နှင့် ဖဲသမားဘယ်၊ အရက်သမားညာ၊ ဒီကစ ချီတက်မယ်။ ဗိုလ်ကြီးညောင်းရင်ရပ်မယ်။ ညမှောင်ရင်စခန်းချမယ်ဟူသော ဖယိုဖရဲမှသည် အောင်ပွဲဆီသို့ဟူသည့် စစ်ကြောင်းကြီးများဖြင့် ချေမှုန်းခြင်းမဟုတ်။ တစ်ရွာမှ တစ်ရွာ မကူးနိုင်စေရန် တစ်မြို့မှတစ်မြို့၊ စာရင်းမလွှဲနိုင်စေရန်၊ ပြိုင်တူချိန်ကိုက် ဝိုင်းဝန်းကြပ်မတ်ကာ စစ်ဆေးအရေးယူဖေါ်ထုတ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့မှသာ၊ အမည်မိုဟာမတ်သာစိန်၊ အဖ အီစွတ်၊ ဆိုသည်နှင့် ရဲစခန်းထောက်ခံစာကိုင် ဘယ်နှယောက်၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာကိုင်ဘယ်နှယောက်၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူကိုင် ဘယ်နှယောက်၊ မှတ်ပုံတင်အစစ်ကြီးနဲ့ ဘယ်နှယောက်၊ ဘိုးဘိုးအောင်လား အလာတော်ရှင်မြတ် တန်းခိုးလား ဘယ်သူ့တန်ခိုးနှင့်မှန်းမသိသော မှတ်ပုံတင်တစ်ခုထဲမှ ပွားများလာသော မိုဟာမတ်ပေါင်းများစွာကို မိုဟာမက်အလီစွပ်၊ မိုဟာမတ်သောင်းအေး၊ မိုဟာမတ်သိဟမဟာ၊ စသည်ဖြင့်သိရှိပြီး။မှတ်တမ်းတင်ပြီး၊ စာရင်းကောက်ပြီး ဖြစ်မှာပါ။ သို့မှသာ။ လူဦးရေတိုးနုန်းက တစ်နှစ်ဘယ်လောက်၊ တစ်ယောက်ကို မိန်းမက ဘယ်နှယောက်၊ သားသမီးကဘယ်လောက်၊ ဘုံဖြစ်နေတဲ့မိန်းမက ဘယ်နှယောက်၊ မိုဟာမက်က ဘယ်နှသောင်း၊ အမီနာ ဘယ်နှသန်း၊ သိမှာပါ။ သိမှသာလျင် မိုဟာမတ်က
ဒုတ်နဲ့ရိုက်လို့ဆိုလျင် ရွှေကုန်သည်မိုဟာမတ်လား၊ ကူလီထမ်းတဲ့မိုဟာမတ်လား၊ အမီနာ့ယောက်ျားလေ ဆိုလျင် တိုရှေရောင်းတဲ့ အမီနာလား၊ ကုန်စုံဆိုင်ရှင် အမီနာလား၊ သည်လိုလုပ်မှ စာရင်းတိကျရှိမှ လူစားထိုးတယ်၊ ပိုက်ဆံပေး လူလဲတယ်ဆိုတာတွေကို (ထိန်းသိမ်းချင်လျင်) ထိန်းသိမ်းလို့ရမှာပါ။ ဒါက ချေမှုန်းရန်အလျင်းမရှိသော။ စစ်ဆင်ရေး။ ချေမှုန်းရန်ရှိလာသော စစ်ဆင်ရေးသည်။ ထိုဘင်္ဂလီတို့တွင် လက်နှက်ကိုင် အဖွဲ့များရှိနေပြီ၊ တရားမဝင် မူးရစ်ဆေးဝါး၊ လက်နှက်ကုန်ကူးနေပြီ၊ အခြား အကြမ်းဖက်များနှင့် ဆက်သွယ်နေပြီဆိုလျင် ချေမှုန်းရေးများပါသော စစ်ဆင်ရေးများ ဆင်နွဲရပါမည်။ ထိုအခါ AK ကြီးလွယ်ထားပြီး မပုတင် ထုတ်ပြလျင်လဲမရပါ ပစ်သတ်ပါလိမ့်မည်။ ထားတော့ ထိုက ချေမှုန်းရေးကိစ္စ။
ထို့အပြင် ရိုဟင်ဂျာသည် ဌာနေတိုင်းရင်းသားဟုဆိုသေးသည်။ ဌာနေတိုင်းရင်းသားဟူသည် မွေးရာပါ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခွင့် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှ်ိသည်။ ပုံစံ၁၀ ဖြည့်လိုက်လျင် အူဝဲလို့အော်သည်နှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော်၏ သမ္မတအထိ မျှော်မှန်းခွင့်ရှိပြီ။ တိုင်းရင်းသားဖြစ်လျင် ကိုယ်ပိုင်ဒေသ ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်ထောင်ထားလျင်ပင် မတရားဟု မကျေငြာနိုင်သေး။ ဘယ်သူမျှလဲ မတရားဟု မမြင်ကြ။ ထို့ကြောင့် ပင်လျင် စစ်ညောင်းတာရှည် မြန်မာပြည်ဇာတ်လမ်းသည် မပြီးသေး၊ သတ်ကောင်းကြဆဲ။
ချစ်ကို June 15, 2012 at 11:51 PM
ဘင်္ဂါလီအရေး ဆက်ရေးရလျင် အတော်အတန်ပင်စိတ်မကောင်း
kyaw June 19, 2012 at 4:33 PM
+102 #10 News Hunter 2012-06-17 15:18
အဓိကလှုံ့ဆော်သူကို ဖော်ထုတ်အပြစ်ပေးနိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီကိစ္စကို အဓိက ကြိုးကိုင်ချယ်လှယ်ခဲ့ကြသူတွေက ဖွတ်ပါတီက ဦးအောင်သောင်း၊ ဦးဌေးဦး၊ ဦးကျော်ဆန်းတို့ဖြစ်နေလို့ပါ။ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ဘူးသီးတောင်-မောင်တောဖွတ်ပါတီ အမာခံတွေနဲ့ ဒီကိစ္စကို စီစဉ်လှုပ်ရှားခဲ့ ပါတယ်။ ဒီဖွတ်ပါတီအမာခံတွေဟာ RSO (ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်းဝင်) တွေဖြစ်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးက ရိုဟင်ဂျာ နက်ဝပ်ခ် တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ ဦးအောင်သောင်းဟာ ဒီကိစ္စကို ရခိုင်နဲ့ ရန်ကုန် ၂ခုမှာ အခြေစိုက်ပြီး၊ ရန်ကုန်မှာ ကျော်ဆန်း+အောင်သိန်လင်း၊ ရခိုင်မှာ မောင်ဦး+ဘုန်းဆွေ တို့ကို တာဝန်ပေးထားပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေကို အားလုံး နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပေးမယ်။ လွှတ်တော်မှာ ဒီကိစ္စတင်မယ်လို့ကတိပေးထားသလို ရိုဟင်ဂျာတွေက ယုံကြည်ခဲ့ကြပြီး ဒီကိစ္စမှာ ဇက်ရဲလက်ရဲမီးရှို့လူသတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
(၁) သမ္မတဦးသိန်စိန် နိုင်ငံတကာမှာ မျက်နှာပျက်စေရန်
(၂) ဒေါ်စုကြည် ပြည်တွင်းမှာ ထောက်ခံမှုကျဆင်းပြီး တိုင်းရင်းသားများနှင့် ပြသနာပေါ်စေရန်
(၃) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် စစ်တပ်က နိုင်ငံရေးမှာ ပိုပတ်သက်လာစေကာ နာမည်ပျက်စေပြီး ကာချုပ်အား၂၀၁၅ မတိုင်မီ ၄င်းအားအစားထိုးရန်
(၄) အကယ်၍ တစ်နိုင်ငံလုံး၌ အဓိကရုန်းဖြစ်ပွားပါက အရေးပေါ် အခြေအနေကြေညာပြီး ဒေါ်စုကြည်၏ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပြန်လာခွင့်ကိုဆိုင်းငံ့ရန်၊ လွှတ်တော်ကိုဆိုင်းငံ့ရန်
ဒါကြောင့် ကျောက်နီမော်က မသီတာထွေးကိစ္စကို ပုံကြီးချဲ့ပြီး ကောလာဟလတွေ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောက်နီမော်ရဲစခန်းကို ၀ိုင်းဆန္ဒပြဖို့လွှတ်တဲ့ အမာခံတွေဟာ ကြံ့ဖွတ်တွေပါ။
တောင်ကုတ်မှာ မော်လ၀ီဆ၇ာတွေကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လူအုပ်မှာ ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ သူတွေအားလုံးဟာ တောင်ကုတ်မြို့ကချည်းပဲ မဟုတ်ပဲ ဦးအောင်သောင်းရဲ့ အနယ်နယ်က စွမ်းအားရှင် လူစိမ်းတစ်ချို့ ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်၂ခုအပြီးမှာ ကျော်ဆန်းက သူ့အစိုးရမီဒီယာကနေ လှုံ့ဆော်ပါတယ်။ TV နဲ့ သတင်းစာမှာပါတဲ့ မွတ်ဆလင်ကုလားဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းက ကျော်ဆန်းကိုယ်တိုင် ရေးတာပါ။
ဒီကိစ္စပြီးတော့ ဆူးလေမှာ ဆန္ဒပြတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေနောက်ကွယ်မှာ အောင်သိန်းလင်း ပါဝင်ပတ်သက်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေက သူတို့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသ ရဖို့ မောင်ဦးနဲ့လက်ဝါးရိုက်ထားပါတယ်။
သူတို့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ထင်တာတွေဖြစ်မလာတော့ သောကြာနေ့ ဗလီအဆင်းမှာ ဆူပူမှုဖြစ်ဖို့ကြိုတင်လှုံ့ဆော်ပါတယ်။ ကုက္ကိုင်းကဗလီကို ခဲနဲ့ပေါက်တာ အောင်သိန်းလင်းရဲ့ ကြံ့ဖွတ် စွမ်းအားရှင်တွေပါ။ ဒီအမှုကို အမှုမဖွင့်ဖို့ မြင့်ဆွေကို အမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ဌေးဦးကို ဒုသမ္မတတင် ၂၀၁၅ မတိုင်မီ ဦးသိန်းစိန်ကို ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြ အနားပေးရန်
(၂) တပ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင် ခိုင်းတိုင်းမလုပ်ပါက ဖယ်ရှားရန်
(၃) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို မပြင်ရန်နှင့် လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်း၏ လွှတ်တော်တွင်း သိက္ခာကျဆင်းအောင်လုပ်ရန်
(၄) ဒေါ်စုကြည်အား လိုအပ်ပါက လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရန်
(၅) ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ အကြောင်းပြ၍ တပ်မှ အာဏာသိမ်းပြီး ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအား ရွှေ့ဆိုင်းရန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ တ၇ားမ၀င် အာဏာသိမ်းဖို့ ကြံစည်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရမှ ဖြိုခွင်းရပါမယ်။ ဒီကိစ္စ မှန်မမှန် သင်တို့၏ facebook များ၌ Share ၍ ကြည့်ပါ။ ဖွတ်အမာခံများ တက်လာပါလိမ့်မည်။
(copy from ..........)
nyinyi June 24, 2012 at 11:35 AM
လည်း အီတလီဘာသာရပ်တခုဖြစ်တဲ့ အာရဇ်စတိုလ်-ဘရူနှိ တော့ဿှီအိုရီ
တွင်သင်ကြားဖူးပါတယ် ဘုရားရှင်ကကောင်းကင်ဘုံမှာနေပါတယ်တဲ့ ။
အီတလီ အာကာသ သံပ္ပံစတင်ထွန်းကားလာချိုန်တွင်အခြားသောတိုင်းပြည်
တွေဟာလှေကားပါမထောင်ကြရသေးပါ ဒါတွေကိုလူတိုင်းမှတ်မိကြမှာပါ ။
ညီညီတော့မြန်မာစာနှင့်လည်းသင်ကြားဖူးလို့ပါ နန္ဒသိန်းဇံ ဘာသာပြန်လည်းရှိပါတယ်နှော် လွင့်လွင့်မျောမျော နှင့်လူသားတော့ရဲ့
ဆောက်တည် စာအုတ်တွင်ပါတယ် ကျွနုပ်တော့နေထိုင်သော ကမ္ဘာမြေ
ကြီးကိုအလင်းရောင်ပေးသောလတစင်းသာရှိပြီး အခြားသောဂြိုလ် ကမ္ဘာ
တွင်လ ၄ စင်းမှနေ ၂၄ စင်းရှိကြောင်းပါတယ် ညီညီ တခါက နာဆာ
ဂြိုလ်တဂြို ဆရာတွေအိပ်ပျော်နေလို့မောင်းလိုက်တာ ဗွတ်တောထဲကိုရောက်သွားတယ် လူတိုင်းလည်းကြည့်ဖူကြပြီးပြီ ။